Showing ७१-८० of ९६८ items.
राज्यले नै ‘बलात्कारी’ को मनोबल बढाइरहेको छ
गत महिना हाम्रो देशमा महिला यौन तथा अन्य हिंसाको शिकार भएका खबरहरू पत्रपत्रिकामा आए । बझाङको मस्टा गाउँपालिकामा बाह्र वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या र लगभग त्यस्तै घटना सुनसरीको वराह गाउँपालिकामा भएका खबरले राष्ट्र तरङ्गित बन्यो । हरेक पटक यस्ता खबरहरू आउँदा हामी दुःखी हुन्छौं र महिलाहरू कुनै अवस्थामा कतिसम्म असहाय हुँदा रहेछन् भन्ने कल्पना गर्छौं । साथै उद्वेलित भएर हामी अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छसम्म भन्छौं तर, त्यस दिशामा ठोस कदमचाहिँ चाल्दैनौं । विस्तारै यी अपराधलाई कानूनी माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने हाम्रो दृढता पानीफोका जस्तो हराएर जान्छ र पुनः अर्को अपराध नहुञ्जेल शान्त हुन्छ । महि
काठमाडौंको डेरामा हामी मस्तराम
राजकुमार दिक्पाल नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तत्कालिन कुलपति वैरागी काँइलाको साथ लागेर सिक्किमको साँस्कृतिक तथा साहित्यिक भ्रमण समापनपछि म आफ्नो घर निस्केँ, आमालाई भेट्न । र केही ब्यावहारिक काम पनि थियो । एकातिर साँइला दाजु र आमा मेरो लागि मीठा मीठा खाना बनाउन ब्यस्त । लोकल भाले काटिएको थियो । म चाहिँ एकतमासले छटपटाइरहेको थिएँ । मेरो टोल सुनसान थियो । कुनै बेला ठूलै संख्यामा पाहुनाहरुको स्वागत गर्ने हाम्रो घरको आगन कोशी पहाडलाई जोड्ने मूलबाटो थियो । मोटरबाटो आएपछि हाम्रो घर पाहुनासुन्य हुँदै गयो । कुनै बेला मदन भण्डारी, अशोक राई, राजेश बान्तवा, चित्र निरौला, रमेश खनाल लगायतका कम्युनिस्ट भूमिग
नेपाल–भारत विवाद र ओलीको गोयलसँग भेटवार्ता !
विषय प्रवेशअन्तरिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेरलाई दबावमा पारेर सन् १९५० मा गरिएको सन्धि र त्यसैको विस्तारको रूपमा सन् १९६५ मा राजा महेन्द्रको पालामा गरिएको सन्धि व्यवहारमा खारेज भए पनि दिल्लीले त्यही सन्धिको हवाला दिँदै काठमाडौंलाई तर्साउने गरेको छ । ‘ती सन्धिहरू व्यावहारिक रूपमा उहिल्यै खारेज भइसकेका छन्’ (जासुसीको जालो ः सरोजराज अधिकारी ः पृष्ठ–४२) । कोशी सम्झौता सन् १९५४, गण्डक सम्झौता सन् १९५९, महाकाली सन्धि सन् १९२०, सन् १९५५ देखि कालापानीमा भारतीय सेना बस्दै आएको, त्रिवेणी सुस्ता २०२० सालमा ४ नेपाली जवानको हत्या गरी कब्जा जमाएको र अन्य सीमाक्षेत्रमा पनि अतिक्रमण भएको
काङ्ग्रेस महाधिवेशन र देउवा रणनीति !
विषय प्रवेशप्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको मिति तोकिसकेको भए पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक गुट–उपगुटको झगडा र विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण तोकिएको मितिमा हुन नसक्ने बताउँछन्, पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू ! १३ औंं महाधिवेशनले दिएको म्याण्डेट पूरा नगरेको, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा सत्तापक्षसँग भागबण्डाको राजनीतिमा अल्मलिएको तथा महाधिवेशनको मिति सकिएपछि समय अवधिमा १४ औं महाधिवेशन गर्न नसकेका जस्ता आरोपहरू देउवाले स्वयम् पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताबाटै खेप्दै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार देउवाले आफूलाई सहज वातावरण नबनाई अर्थात् आफू सभ
को हुन् लेखक–पत्रकार ?
पत्रकारिता आम सञ्चारमाध्यमको एउटा साधन, सीप र कला हो । नेपाल लगायत एसियाका मुलुकहरूले नयाँ युगको पत्रकारितालाई आह्वान गर्न थालिसकेका छन् । यद्यपि यो धेरै मुलुकमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जीवनशैलीको अप्रिय अङ्ग हुन अझ निकै समय लाग्नेछ । सञ्चारको युग हो, यो । केही बोल्ने र केही गर्ने प्रथम कर्ता लेखक पत्रकार नै हुन् । एक अहिंसापूर्ण निर्वाण युद्ध पनि हो, लेखन र पत्रकारिता । लेखक–पत्रकारले जे लेख्छन्, भोलिको लागि एउटा इतिहास लेख्छन् । कति गहन छ, जिम्मेवारी ? आज रोपेका शब्द नै भोलि इतिहासका बिरुवा भएर उम्रिन्छन् । बुद्धले जस्तै फिग्राहमले लेखक–पत्रकारमाथि ठूलो जिम्मेवारी सुम्पेर गए ।
धरानको खस्कँदो उपभोक्ता बजार
हुन त धरान बजारलाई सरसर्ती हेर्दा यो बजार अत्यन्तै आकर्षक लाग्छ । सिलसिलेवार तरिकाबाट आकर्षक तवरले सजाइएका समानहरू, एउटै बजारमा विविध तवरका पसलहरू त्यसमा पनि फुटपाथसमेतका चौडा सडकहरूले बजारको शोभा बढाएकै छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको निर्माणपछि प्रारम्भिकरूपमा रहेको धरानको खरिद बिक्री केन्द्रस्थल जो त्यस बेलाको वडा नं. २ र ५ मा पुरानो बजार र नयाँ बजारको नामले प्रसिद्ध थियो । अहिले पश्चिम सर्दुु खोलाको छेउछाउसम्म फैलिएको छ भने पूर्वतर्फ सेउती किनारसम्म पनि फैलिएको छ । साथै यो शहर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै फैलिएको छ । बजारको उन्नतिमा साक्षी रहेका प्रतिष्ठानहरूमा धरान औद्योगिक क्ष
१,०११ पटक पढिएको
नेपाली काङ्ग्रेस मास पार्टी भएकाले उपल्लो तहका कर्तव्यनिष्ठ, समर्पित, इमान्दार कार्यकर्ता भए तापनि व्यक्तिगत सुख–दुःख बारे सिद्धान्ततः चाख नराख्ने पार्टी हो । कार्यकर्ताहरूमा सौहाद्र्रता भए तापनि सङ्गठनका दृष्टिले आपसमा अपनत्व कायम राख्न सक्ने सौहाद्र्रता छैन । आफै मात्र उक्लिने, बलियो हुने होडबाजी छ । ‘गु्रपइजम’ पनि एउटा कारण हो, सङ्गठन सुदृढ नहुनुमा । त्यसैले युग सुहाउँदो वैज्ञानिक छैन नेपाली काङ्ग्रेस । सङ्गठनबारे नेताहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन् । नेताहरूको कार्यकर्ताप्रतिको व्यवहार र व्यवहारिक तालमेल फरक छ । धेरै वर्षदेखि काङ्ग्रेसका पदाधिकारीहरू धेरै आए, जति पनि आए झन्&nda
महिलाले सुरक्षित र स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको वकालत हुन थालेको निकै भयो । तथापि नेपाली समाजमा अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा महिलाहरू हिंसाको सिकार हुने गरेका छन् । महिलामाथि गाली गलोज हुनु, कुटपिट गर्नु, मानसिक यातना दिनु, विभिन्नखाले लाञ्छना लगाउनु र घर निकाला गर्नु जस्ता क्रियाकलाप दिनहुँ हुने गरेको छ । हाम्रो नेपाली समाजमा महिलामाथि हुने हिंसा विकराल रूपमा छ । महिलाको आधारभूत आवश्यकता र मानव अधिकारको उपभोगमा समेत बन्देज प्रायः लगाइएको छ । यस्तो हुनु मानवअधिकारको उल्लङ्घन र हनन् हुनु हो । आफ्नै घरपरिवार, समाज र विश्वास मानिएका व्यक्तिहरूबाटै धेरै जसो महिलाहरू हिंसामा परिरहेका छन् । महिल
विषय प्रवेशःनेपालको राजनीतिक वृत्तमा दिल्ली–बेइजिङ बझाएर हेर्ने दृष्टिकोण छ । सत्ता, सरकार, पद, शक्ति तथा आफ्नो स्वार्थ सिद्धका निम्ति दिल्ली–बेइजिङ रणनीति, कूटनीति अभ्यास मात्र गरेका छैनन् कि एशिया विश्वयुगको (यसको नेतृत्व चीनले गरिरहेको छ) बाधक मुख्यतः वासिङ्टन लगायत पश्चिमाहरूसँग पनि निकटता अपनाउँदै आएका छन् । वासिङ्टन, पश्चिमाहरू दिल्ली–बेइजिङ युद्ध चर्काउन चाहन्छन् । किनभने विश्व महाशक्तिशाली उदीयमान बेइजिङ–दिल्लीसँग युद्ध गरे बेइजिङ–दिल्ली दुवैको शक्ति कमजोर हुने तिनीहरूको विश्लेषण रहेको छ । खासमा वासिङ्टन दिल्लीलाई उचालेर काठमाडौंमा रणनीतिक, कूटनीतिक उद्देश
प्रकाशित मितिः आश्विन २६, २०७७
पढाउनु प्रक्रिया मात्र होइन, कला पनि हो । ज्ञान हुनु वा विषयमा पोख्त हुनु मात्र शिक्षणका निम्ति आवश्यक पर्ने गुण होइन । एउटा असल शिक्षक बन्न ज्ञानका साथै कला हुनु आवश्यक हुन्छ । अहिले २१ औं शताब्दीका विद्यार्थी शिक्षकभन्दा पहुँचका हिसाबले शक्तिशाली मानिन्छन् । अहिलेका शिक्षकको प्रमुख चुनौती नै विद्यार्थीसँग फिट हुनु हो । त्यसका निम्ति शिक्षक र विद्यार्थीबीचको संवाद अनि सम्बन्धले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दछ । ज्ञान र कलाका साथै विद्यार्थीसँगको सुमधुर सम्बन्धका कारण दक्षिणवर्ती क्षेत्रमा मात्रै होइन, सुनसरी जिल्लामा नाम चलेका शिक्षक हुन् निजामुद्दिन अन्सारी अर्थात् नजाम सर । पढ्दै गर्दा शि